मैले पाउनेभन्दा बढी माया पाइरहेको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मैले पाउनेभन्दा बढी माया पाइरहेको छु: वर्षा राउत
अभिनेत्री वर्षा राउतले 'नाईं नभन्नू ल ३'बाट नेपाली सिनेमामा डेब्यू गरिन्। राम्रो ब्यानरबाट सुरूवात पाएकी वर्षा त्यसयता गतिलो ब्रान्डकै रोजाइमा पर्दै आएकी छन्। धेरैजसो सिनेमा उनी मूख्यभन्दा पनि सहायक भूमिकाहरूमा देखिंदै आइरहेकी छिन्। सहायक भएपनि उनी दर्शकको नोटिसमा पर्छिन्। कलाकारका लागि यो ठूलो सुख हो।
वर्षाले आफूले कहिले पनि अभिनेत्री बन्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिनन् तर समयक्रमले उनलाई अभिनेत्री बनायो। अवसर आउँदा नाईं भनिन्। नाईं नभनी रोजेको बाटो आज उनका लागि सबैभन्दा राम्रो निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
'मलाई हिरोइन बन्छु भन्ने त थिएन तर पर्दाभित्र कुनै दिन आउँछु भन्नेचाँहि सोचिरहन्थे।त्यही भएर म्यूजिक भिडियोमा कोरस बने। सानोमा पनि म टिभीमा हेरेर नक्कल उतार्ने प्रयास गर्थे।सोच्थे कुनै दिन यसभित्र देखिन्छु।'
उनको त्यो सपना विपना भइसकेको छ। सिनेमामा उनको व्यस्तता बढ्दै छ। सुटिङ र रिलिजका सिनेमाको प्रचारले उनलाई व्यस्त बनाइरहेको छ। हाल 'चौका दाउ'को प्रचारका क्रममा वर्षा देश दौडाहा गर्दै नेपालका विभन्न शहरहरू पुगिरहेकी छिन्। यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारीले उनीसँग उनको सिनेमा करियर, भूमिका छनौटका बारेमा गरेको कुराकानी यस्तो थियो:
करियर अहिले कता गइरहेको छ?
(हाँस्दै) अहिले लाइनमै गइरहेको छ।
पहिलो सिनेमा गर्दा के सोच्नुभएको थियो?
पहिलो सिनेमा गर्दा अहिलेको बारेमा केहि पनि सोचेको थिइन। पहिलो म्यूजिक भिडियो गर्दा पनि केहि सोचेको थिइन, एउटा कोरसबाट सुरू गरेको थिएँ। अहिले त्यो सोम्झिंदा म धेरै माथि छु जस्तो लाग्छ। दर्शकहरूको माया पाइरहेको छु।
डेब्यू राम्रो ब्यानरबाट पाउनुभयो, त्यसपछि पनि राम्रा ब्यानरमा नै जोडिनुभयो। काम सुरू गर्दा केहि नसोचेको मान्छेले अहिले के सोच्ने गर्नुहुन्छ?
जतिपनि काम गरें, धेरैमा मेरो भूमिका सहायक अभिनेत्रीको छ। दर्शकले नोटिस गरिरहनुभएको छ। त्यो हिसाबले मैले राम्रो गरेको छु। मैले एकदमै ठूलो बलियो भूमिका गरेको र पाएको छैन। यो हिसाबमा दर्शकहरूबाट मैले पाउनेभन्दा बढि माया पाइरहेको छु।
सहायक भूमिकाहरूमात्र गरिरहनुको कारण के हो?
किनभने म अहिले आफूलाई कुनै एउटा राम्रो भूमिका लागि तयार गर्दैछु। जब भोली म त्यो भूमिकामा पर्दामा देखिनेछु तब मलाई यो यहाँ राम्रो गरेको भए वा यस्तरी गर्न पाएको भए भन्ने नलागोस् भनेर हो। त्यो बेला यस्तो मिलेन वा त्यो भएन भन्ने बहाना नहोस् ।
गरेका भूमिकामा मनपरेको भूमिका कुन सिनेमाको हो?
'जात्रा'को। सिक्वलमा आउन लागेको भूमिकामा पनि मलाई एकदमै चित्त बुझेको छ।
'छक्का पञ्जा'मा कलाकारहरूको भीडका बाबजुद धेरैले तपाईंको कामको तारिफ गरेका थिए? त्यो भूमिकामा कसरी तयार गर्नुभयो?
कथा सुन्दा मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो। मैले हुन्छ गरौं भने। गर्छु त भने तर पछि डर लाग्यो। दोश्रो सिनेमा नै त्यस्तो भूमिका गर्नुपर्‍यो। मलाई मेरो इमेज खराब होला की भन्ने डर थियो। म एकपटक बोलेपछि हत्तपत् बोली फेर्दिन। गर्ने भनिहालें, तर दर्शकले गाली गर्नुहोला भनेर डर लागेको थियो। रिलिज हुने दिन आउँदै गर्दा डरले रिलिज नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो। सिनेमा हेर्न जाँदा पनि चिन्लानकी भनेर माक्स लगाएर गएकी थिएँ।
सुटिङ गर्दा कसरी गरे मलाई आइडिया भएन, एक्सन भन्नासाथ क्यारेक्टरमा गइहाल्थे। अनि सिनेमा हेर्दा सबैले ताली बजाएपछि खुशी लाग्यो अनि निस्कदा माक्स फुकालेर खुशी हुँदै निस्किएं।
हातमा स्क्रिप्ट परेपछि तपाईंले खोज्ने कुरा के हो?
सबैभन्दा पहिले टिम हेर्छु। टिम राम्रो छ भने मात्र स्क्रिप्ट लिन्छु। त्यसपछि मेरो भूमिका कति बलियो छ, कस्तो छ, कति काम देखाउन पाउँछु, त्यो विचार गर्छु अनि पैसातीर जान्छु।
सिनेमा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा आफै प्रमूख निर्णयकर्ता होकी अरूसँग पनि सल्लाह लिने गर्नुहुन्छ?
प्रायजसो म संजोग कोइरालालाई सोध्ने गर्छु। मेरा अधिकाशं स्क्रिप्ट उसले पढ्छ। पढेपछि उसले यो राम्रो छ वा नराम्रो छ भन्छ। त्योसँगै उसले तिमी के गर्छौ? सोच, गर भन्छ। तर अन्तिम निर्णय मेरो हुन्छ।
जतिपनि सिनेमाहरू गर्नुभयो, सन्तुष्ट छैन् अझ चाँहेजस्तो सिनेमा गर्न पाएको छैन् भन्नुभयो, तपाईले चाहेको भूमिका कस्तो हो?
नियमित गरेको भन्दा फरक देखियोस्, हेर्नेले साँच्चै वर्षाले नयाँ गरेको छ भन्ने होस्। उदाहरणको लागि रेखा दिदी(रेखा थापा)को जति पनि सिनेमा छ, ती महिला प्रधान छन्, अनि 'प्रसाद' भयो। यस्तो यस्तो सिनेमा गर्न मन छ।
अनि त्यस्तो स्क्रिप्टहरू पाइरहनुभएको छैन् हो? नेपालमा एउटाखाले भूमिकामा चलेपछि त्यस्तै भूमिकाहरूको प्रस्ताव ओइरिने गर्छ।
ठ्याक्कै त्यस्तै पनि होइन। फरक पनि आउँछ, मैले 'छक्का पञ्जा' र 'जात्रा'मा गृहिणीको भूमिका गरें तर आइरहेको 'दाल, भात, तरकारी', 'चौका दाउ'मा फरक फरक खाले भूमिका छ।
कलाकारका रूपमा तपाईले गरिसकेका सिनेमा हेर्दा आफूले के बिगारें भनेर हेर्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले लुक्स हो। लुक्स हेर्दा ला म यतिबेला मोटी देखिया रैछु भन्ने हुन्छ। अभिनय हेर्छु। आफूले हेर्दा गरेको ठीक छ जस्तो लाग्छ, जब अरूको हेर्छु तब मलाई मैले गतिलो गरेको रहेनछु लाग्छ। अलि फिल दिन नसकेको पाउँछु।
अनि सिनेमा गर्ने तय भएपछि पात्रका लागि कस्तो तयारी गर्नुहुन्छ?
सुरू सुरूमा मलाई अभिनयको बारेमा धेरै थाहा थिएन, त्यसै अन द स्पट हुन्थ्यो । त्यतिबेला मेरो लागि अभिनय भनेकै डायलग रट्ने भन्ने थियो। तर 'जात्रा' गर्न थालेपछि अभिनय बुझें। 'क्यारेक्टर इम्प्रोभाइजेसन के हो, वर्कसपको फाइदा के हुन्छ? आदि बुझें। थिएटरका कलाकारहरू, त्यसमा पनि विपिन कार्कीबाट यसबारेमा धेरै कुरा सिक्न पाएँ। त्यसपछि पात्रलाई चाहिने कुराको अध्ययन गर्न थाले।
त्यसका लागि के के गर्नुहुन्छ?
म नियमित जीवनमा ठोकिने पात्रहरूलाई अध्ययन गर्छु। हाउस वाइफ गर्देछु भने ममीलाई हेर्छु, छिमेकीलाई हेर्छु। उहाँहरूको के कस्तो स्वभाव शैली छ त्यो हेर्छु। यस्तैबाट रिफरेन्स लिन्छु। सिनेमाहरू धेरै हेर्छु तर किताब पढ्नचाँहि अल्छि छु। विशेषगरी सर्ट सिनेमा र नन-मसाला सिनेमा हेर्छु।
'चौका दाउ' रिलिजका क्रममा छ, के देखेर सिनेमालाई ओके भन्नुभयो?
टिम राम्रो लाग्यो। निर्देशक पुणेन्द्रु झालाई धेरै पहिलादेखि चिन्थे। 'संरक्षण'मा उहाँले गरेको काम राम्रो लाग्यो। स्क्रिप्ट पढें। पढेपछि कुनै हिन्दी सिनेमाको कपीजस्तो लागेको थियो, त्यो मैले सोधें। उहाँहरूले प्रभावित हो पूरै कपी गरेको होइन भनेपछि म तयार भएँ। स्क्रिप्ट पढ्दा धेरै नै इन्जोय फिल गरे र सुटिङमा पनि । त्यसैले सिनेमा दर्शकले मनपराउनुहुन्छ भन्नेमा धेरै आशावादी छु।
गरेको कामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
पूरा सिनेमा हेर्न पाएको छैन्, डबिङमा हेर्दा अझ राम्रो गर्नसक्थे लाग्यो, कति कुरामा ध्यान दिएको रहेनछु।
यो सिनेमा तपाईको करियर टर्निङ पोइन्ट सिनेमा हो की एउटा नियमित सिनेमा?
अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिन, रिलिजपछि मात्र भन्न सक्छु। सिनेमाको बारेमा दर्शकले दिएको प्रतिक्रिया महत्वपुर्ण हुन्छ। म त्यसैलाई कुर्छु, कहिलेपनि सिनेमा रिलिज अगाडी यो यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गरेर बस्दिन।
निर्देशकको काम कस्तो लाग्यो?
सफ्ट हुनुहुन्छ। अल स्ट्रिक्ट हुनुपर्‍यो।
अन्तिम प्रश्न, कामका लागि पाउनुभएको ठूलो कम्प्लिमेन्ट?
धेरैले मेरो अभिनय कस्तो राम्रो भन्नुहुन्छ तर मलाईचाँहि लाग्दैन्। आफूलाई ठीकैको ठान्दछु किनकी हास्दा रूदाँ म फिल गरेर हाँसिरहेको हुँदिन्। यसमा मैले धेरै मेहेनत गर्न बाँकी छ। स्क्रिप्टमाथि अझ मेहेनत गर्नुपर्ने म महशुस गरिरहन्छु।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस १९, २०७५, ०७:४७:००
लकडाउनमा कसरी घर–घरमा अत्यावश्यक सामान पुर्‍याउने? दाङबाट सिक्ने कि!
एउटा गाउँपालिका अध्यक्षको भूमिकाले धेरै फरक पार्छ कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा
जिम बन्द भएपछि ग्यास सिलिन्डर र चामलका बोरा बोक्दै खेलाडी
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यसरी बनाउँदै छ पिपिई (फोटोफिचर)
कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सेवा र सुशासन डा कपिल दाहाल
'आजकाल हामीहरू छतबाटै हेराहेर र अलिअलि गफ गर्छौं' एलिसा घिमिरे